Haiti: Mitady Fanafana Amin’ny Tsy Fahampian-tsakafon’ny Zaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2017 6:40 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, বাংলা, Português, Français, 繁體中文, 简体中文, فارسی, Italiano, English
(sary : Reasons not to Overeat avy amin'i BreezeDebris)
Tao amin'ny YouTube, manolotra antsika lahatsary mampiseho ny fomba fahandron'ny fianakaviana iray rehefa hanamboatra mofo fotaka ny toddgsapp, tsy natao ho hanin'izy ireo ihany fa amidy ihany koa izy ity. Ireo bisky vovoka na mofomamy fotaka ireo dia vita avy amin'ny tany, legioma matavy sy sira, ary matetika no loharanon-tsakafo hany fiveloman'izy ireo.
Toa efa mahafantatra ny olana ny ankamaroan'ny olona, kanefa kely ihany no azontsika atao mba hanampiana azy ireo. Nitroka lahatsary momba ny krizy ara-tsakafo any Haiti ny lovinitwithhim izay avy amin'ny fikambanana Kids Against Hunger (Ankizy Miady amin'ny Hanoanana) ary azonao jerena eto.
Ho hitantsika amin'ny alalan'ny lahatsary navoakan'ny Fahitalavitra Current avy amin'ny orinasam-pamokaran-dahatsary Robhill ho an'ny fikambanana Meds and Food for Kids (MFK-Fanafody sy Sakafo ho an'ny Ankizy) any Haiti ny asan'ny ONG izay mikaroka sy manao fanandramana mba hahitana ny mety ho vahaolana hiadiana amin'ny tsy fahampian-tsakafon'ny ankizy, miaraka amin'ny vokatra dibera avy amin'ny voanjo be otrikaina izay efa vonona ho ampiasaina sy omena ny ankizy. Voalaza fa ahitana voanjo, vovo-dronono, siramamy, menaka, vitaminina sy sira mineraly ity dibera avy amin'ny voanjo “matsiro” ity. Novokarina tao an-toerana avy amn'ny voanjo Haisiana izay novokarin'ny tantsaha ao amin'ny faritra izany ary novidiana tao an-toerana avokoa ny fangarony rehetra, izay manampy ny toe-karena ao an-toerana ihany koa. Araka ny MFK , mitentina 44€ (68$ Amerikana) ny mitsabo ny ankizy amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy mitondra azy ho amin'ny fiainana indray miaraka amin'ity sakafo fitsaboana efa vonona ity izay antsoina hoe Medika Mamba amin'ny teny Haiti.